Somaliland oo Amaro kusoo rogtay Shacabka iyo Saxaafada Laascaanood • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Somaliland oo Amaro kusoo rogtay Shacabka iyo Saxaafada Laascaanood
Somaliland oo Amaro kusoo rogtay Shacabka iyo Saxaafada Laascaanood
May 23, 2018 - By: HORSEED STAFF
Xubnaha ka socda maamulka Somaliland ee ku sugan magaalada Laascaanood oo ay ku jiraan xildhibaanada golayaasha Somaliland ayaa wareegto ay soo saareen ku sheegay in shacabka Laascaanood laga mamnuucay dhamaan shirarka, warsaxaafadeedka iyo waxa loogu yeeray kicinta shacabka.
Wareegtadan ayaa lagu soo beegay saacado kadib markii Puntland go’aano kasoo saartay xaalada dagaal ee Tukaraq iyo gobalka Sool.
Shacabka ku dhaqan Laascaanood ayaa laga mamnuucay inay wax hub ah magaalada la dhexmari karaan iyadoo la sheegay in hubka loo ogolyahay ciidamada Somaliland oo kaliya.
Waxaa sidoo kale la sheegay in shacabka aysan qaban karin shirar gooni gooni aha ama mid guud, iyadoo sidoo kale la mamnuucay in shir jaraa’iid ay qabtaan cuqaasha ama shacabka magaalada ku dhaqan.
Baashe ayaa si gaar ah carabka ugu dhuftay shirkii jaraa’ iid oo uu qabtay Caaqil Axmed Hoolif oo si adag uga hadlay qadiyada Sool, Sanaag iyo Cayn isagoo sheegay inaysan ka tirsaneyn Somaliland balse xoog lagu heysto shacabka. Wuxuu sidoo kale ku tilmaamay xubnaha gobalka kasoo jeeda ee Somaliland xilalka ka haya kuwo Calooshood u shaqeystayaal ah oo aan dadka matelin waa siduu caaqilka sheegayee.
Amarada maanta kasoo baxay xubnaha ku sugan Laascaanood ayaa muujinaya in Somaliland xiligan walaac kasoo wajahayo guuxa shacabka ee gobalka Sool oo iyagu horey u muujiyey marar badan inay kasoo horjeedaan nidaamka Somaliland iyo gooni isutaaga Hargeysa looga dhawaaqay.